Izindaba - I-Evaporative Condenser
I-condenser evaporative ithuthukisiwe kusuka embhoshongweni wokupholisa. Isimiso sokusebenza kwaso ngokuyisisekelo siyefana nesombhoshongo wokupholisa. It is ikakhulukazi sakhiwa ukushisa, uhlelo amanzi kwegazi kanye fan uhlelo. I-condenser evaporative isuselwa ekunciphiseni kwe-evaporative kanye nokushintshana okunengqondo kokushisa. Uhlelo lokusatshalaliswa kwamanzi ngaphezulu kwesifudumezi ngokufafaza ngokuqhubekayo amanzi okupholisa abheke phansi ukwakha ifilimu lamanzi ebusweni bethubhu lokushintshanisa ukushisa, Ukushintshana okunengqondo kokushisa kwenzeka phakathi kwethubhu yokushintshanisa ukushisa noketshezi olushisayo kushubhu, nokushisa idluliselwa emanzini okupholisa ngaphandle kweshubhu. Ngasikhathi sinye, amanzi apholisayo ngaphandle kwethubhu yokushintshanisa ukushisa axubene nomoya, futhi amanzi okupholisa akhipha ukushisa okucashile kokuhwamuka (okuyindlela eyinhloko yokushintshanisa ukushisa) emoyeni ukupholisa, ukuze izinga lokushisa lokujiya uketshezi lusondele ekushiseni kwesigaxa esimanzi somoya, futhi ukufudumala kwaso kunganciphisa u-3-5 than kunesistimu yokupholisa amanzi epholile.
1. Umphumela omuhle we-condensation: ukushisa okukhulu okushonile kokuhwamuka, ukushisa okuphezulu kokushisa kokugeleza okuguqukayo komoya ne-refrigerant, i-condenser evaporative ithatha ukushisa kwe-bulb emanzi njengamandla okushayela, isebenzisa ukushisa okucashile kokuhwamuka kwefilimu lamanzi kwikhoyili ukwenza ithempelesha ye-condensation eseduze nezinga lokushisa le-ambi emanzi, futhi ukushisa kwayo kwe-condensation kungaba ngaphansi kuka-3-5 ℃ kunalokho kohlelo lokupholisa lwamanzi opholile wamanzi no-8-11 ℃ ngaphansi kunesistimu yomoya opholile opholile, owehlisa kakhulu ukusetshenziswa kwamandla kwe-compressor, isilinganiso sokusebenza kahle kwamandla sikhuphuke ngo-10% -30%.
2. Ukonga amanzi: ukushisa okushisayo kwamanzi kusetshenziselwa ukushintshanisa ukushisa, futhi ukusetshenziswa kwamanzi okujikelezayo kuncane. Uma kubhekwa ukushaywa kwamanzi nokulahlwa kwendle, ukusetshenziswa kwamanzi akukho-5% -10% we-condenser esepholile ngamanzi jikelele.
3. Ukonga amandla
Izinga lokushisa elifingqayo le-condenser evaporative lilinganiselwe ukushisa kwe-bulb emanzi, futhi izinga lokushisa le-bulb elimanzi ngokuvamile liphansi ngo-8-14 ℃ kunelizinga lokushisa elomile. Kuhambisana nemvelo yengcindezi engemihle ebangelwa i-fan eseceleni ephezulu, izinga lokushisa lokujiya liphansi, ngakho-ke isilinganiso sokusetshenziswa kwamandla se-compressor siphansi, futhi ukusetshenziswa kwamandla kwefeni nepompo lamanzi le-condenser kuphansi. Uma kuqhathaniswa namanye ama-condensers, i-condenser evaporative ingonga amandla we-20% - 40%.
4. Izindleko zokuqala zokutshala imali nezokusebenza eziphansi: i-condenser evaporative inesakhiwo esihlanganisiwe, ayidingi umbhoshongo wokupholisa, ithatha indawo encane, futhi kulula ukuyakha yonke ngesikhathi sokukhiqiza, okuletha ukufakwa okulula nokunakekelwa.